ဒုတိယတပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်(ကြည်း) ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး စိုးဝင်း မြန်မာ နိုင်ငံဆိုင်ရာ ဗြိတိန်နိုင်ငံသံအမတ်ကြီး ဦးဆောင်သောကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့အား လက်ခံတွေ့ဆုံ | cincds
ဒုတိယတပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်(ကြည်း) ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး စိုးဝင်း မြန်မာ နိုင်ငံဆိုင်ရာ ဗြိတိန်နိုင်ငံသံအမတ်ကြီး ဦးဆောင်သောကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့အား လက်ခံတွေ့ဆုံ
ဒုတိယတပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်(ကြည်း) ဒုတိယ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး စိုးဝင်းသည် မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ဗြိတိန်နိုင်ငံသံအမတ်ကြီး H.E.Mr. Daniel Patrick Brendon Chugg ဦးဆောင်သော ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့အား ယနေ့မွန်းလွဲပိုင်းတွင် နေပြည်တော်ရှိ ဘုရင့်နောင်ရိပ်သာ ဧည့်ခန်းမဆောင်၌ လက်ခံ တွေ့ဆုံသည်။
တွေ့ဆုံပွဲသို့ ဒုတိယတပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်(ကြည်း) နှင့်အတူ ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ်ရုံး(ကြည်း)မှ တပ်မတော်အရာရှိကြီးများ တက်ရောက်ကြပြီး မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ဗြိတိန်နိုင်ငံ သံအမတ်ကြီးနှင့်အတူ ဗြိတိန်နိုင်ငံစစ်သံမှူး Colonel Jamie Murray နှင့် တာဝန်ရှိသူများ တက်ရောက် ကြသည်။
ထိုသို့တွေ့ဆုံရာတွင် တပ်မတော်သားများအနေဖြင့် တာဝန်ထမ်းဆောင်ရာတွင် ၂၀၀၈ ခုနှစ် ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေမှ သတ်မှတ်ပေးထားသည့် ဥပဒေနှင့်အညီ လိုက်နာဆောင် ရွက်နေမှုအခြေအနေများ၊ တပ်မတော်အတွင်း အရွယ်မရောက်သေးသူကလေးသူငယ်များ စစ်မှုထမ်းခြင်းမရှိစေရေး CTFMR နှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခဲ့မှုအခြေအနေများ၊ နှစ်နိုင်ငံ တပ်မတော်နှစ်ရပ်အကြား ဆက်ဆံရေးတိုးမြှင့်ဆောင် ရွက်မည့် အခြေအနေများအား အပြန်အလှန်ဆွေးနွေးခဲ့ကြကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
ဒုတိယတပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျ ကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျ(ကွညျး) ဒုတိယဗိုလျခြုပျမှူးကွီး စိုးဝငျး မွနျမာ နိုငျငံဆိုငျရာ ဗွိတိနျနိုငျငံသံအမတျကွီး ဦးဆောငျသောကိုယျစားလှယျအဖှဲ့အား လကျခံတှဆေုံ့
နပွေညျတျော၊ ဇှနျ - ၂၄
ဒုတိယတပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျ ကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျ(ကွညျး) ဒုတိယ ဗိုလျခြုပျမှူးကွီး စိုးဝငျးသညျ မွနျမာနိုငျငံဆိုငျရာ ဗွိတိနျနိုငျငံသံအမတျကွီး H.E.Mr. Daniel Patrick Brendon Chugg ဦးဆောငျသော ကိုယျစားလှယျအဖှဲ့အား ယနမှေ့နျးလှဲပိုငျးတှငျ နပွေညျတျောရှိ ဘုရငျ့နောငျရိပျသာ ဧညျ့ခနျးမဆောငျ၌ လကျခံ တှဆေုံ့သညျ။
တှဆေုံ့ပှဲသို့ ဒုတိယတပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျ ကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျ(ကွညျး) နှငျ့အတူ ကာကှယျရေး ဦးစီးခြုပျရုံး(ကွညျး)မှ တပျမတျောအရာရှိကွီးမြား တကျရောကျကွပွီး မွနျမာနိုငျငံဆိုငျရာ ဗွိတိနျနိုငျငံ သံအမတျကွီးနှငျ့အတူ ဗွိတိနျနိုငျငံစဈသံမှူး Colonel Jamie Murray နှငျ့ တာဝနျရှိသူမြား တကျရောကျ ကွသညျ။
ထိုသို့တှဆေုံ့ရာတှငျ တပျမတျောသားမြားအနဖွေငျ့ တာဝနျထမျးဆောငျရာတှငျ ၂၀၀၈ ခုနှဈ ဖှဲ့စညျးပုံ အခွခေံဥပဒမှေ သတျမှတျပေးထားသညျ့ ဥပဒနှေငျ့အညီ လိုကျနာဆောငျ ရှကျနမှေုအခွအေနမြေား၊ တပျမတျောအတှငျး အရှယျမရောကျသေးသူကလေးသူငယျမြား စဈမှုထမျးခွငျးမရှိစရေေး CTFMR နှငျ့ ပူးပေါငျးဆောငျရှကျခဲ့မှုအခွအေနမြေား၊ နှဈနိုငျငံ တပျမတျောနှဈရပျအကွား ဆကျဆံရေးတိုးမွှငျ့ဆောငျ ရှကျမညျ့ အခွအေနမြေားအား အပွနျအလှနျဆှေးနှေးခဲ့ကွကွောငျး သတငျးရရှိသညျ။